आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ वैशाख ०९ गते सोमबार - Purbeli News
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख ०९, २०७६ समय: ५:५५:२०
वि.सं. २०७६ वैशाख ०९ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१९ अप्रिल २२ तारिख, वैशाख कृष्ण तृतीया, अनुराधा नक्षत्र, बृश्चिक राशिको चन्द्रमा, व्यतिपात योग, विष्टि (भद्रा) र बब करण, आजको चाडपर्व र उत्सव : साँखु यात्रा (सकोयात), स्वामी शशिधरको जन्मजयन्ती, आजको मूहुर्त : अन्नप्राशन(पास्नी), कर्णवेध(कान छेड्ने), अक्षरारम्भ, पसल थाप्ने, गृहारम्भ (घरको जग राख्ने), वास्तुमुहूर्त, द्रव्यप्रयोग वा लगानी, घर छाउने÷ढलान गर्ने, डेरा सर्ने, दीक्षाग्रहण, भोलिको चाडपर्व र उत्सव : मङ्गल चौथी व्रत, भोलिको मूहुर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), अग्निवास(होमादि),
राहु काल : बिहान ०७:१२ देखि ०८:४९ सम्म, यमघण्ट : बिहान १०:२६ देखि १२:०३ सम्म, गुलिक काल : दिउँसो ०१:४० देखि ०३:१८ सम्म
अमृत वारवेला : बिहान ०५:३५ देखि ०७:१२ सम्म र साँझ ०४:५५ देखि ०७:५५ सम्म, लाभ वारवेला : दिउँसो ०३:१८ देखि ०४:५५ सम्म, शुभ वारवेला : बिहान ०८:४९ देखि १०:२६ सम्म, भोलि कतै यात्रा गर्ने उपयुक्त साइतको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य (उत्तरपश्चिम) र ईशान (उत्तरपूर्व) दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश यात्रामा निस्कनै पर्ने छ भने चामल वा दूध खाएर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरेमा पनि शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । पञ्चाङ्गखण्ड समाप्त भएको छ, यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँअनुसार तिथि, नक्षत्रादि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ ।
पराक्रम स्थानमा कमजोर चन्द्रमा भएकाले मिश्रित प्रभाव भएको दिन छ । साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नु पर्ने दिन हो, आज । आफन्तहरू टाढिनेछन् भने काम बिग्रने डरले सताउनेछ । पहिले दिएको वचनले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । परिस्थितिले सोचेभन्दा फरक मोड लिन सक्छ । सहयोगीहरूको भावना बुझ्न नसक्दा केही अप्ठ्यारोमा परिनेछ । सञ्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ । कृषि तथा पशुपालनमा लागत बढ्नेछ । पारिवारिक असमझदारीले पनि काममा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । तापनि मिहिनेत गर्दा फाइदा नै हुनेछ । परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन भने खिन्न रहनेछ ।
काममा ढिलासुस्ती हुनसक्छ । अप्रिय समाचारले दुःखी बनाउने छ । पढाइलेखाइमा बाधा पुग्नेछ । व्यापार÷व्यवसायमा सोचेको फाइदा लिन सकिंदैन । नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्दा लगानी डुब्ने डर हुन्छ । परिवारजनसँगको आत्मीयतामा कमी आउने छ । आफ्नै कमजोरीले विवादमा परिनेछ तर सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई फाइदा हुनेछ । धेरै टाढाको यात्रा गर्नु हानिकारक बन्नसक्छ । पतिपतगबिीच घरसल्लाह नमिल्न सक्छ । अनजानको गल्तीले हानि पुर्याउन सक्छ, सजग रहनुहोला । खर्च बढ्नुका साथै आर्थिक सङ्कटले सताउन सक्छ । समय र नियमलाई बेवास्ता गर्दा चुनौती आइलाग्नेछन् ।